၂၀၁၄ အောက်တိုဘာ | NAB သတင်းများ | 2015 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » အောက်တိုဘာလ
TSL ကုန်ပစ္စည်းများ AdInfa, ဦးဆောင် Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံခန့်ခွဲမှု (DCIM) software ကိုဖြေရှင်းချက် InSite ၏ developer ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ယခုအပတ်အပြီးသတ်ခဲ့သည့်အဆိုပါဝယ်ယူ, ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအဖို့ဒေတာစင်တာကိုဈေးကွက်သို့ခိုင်မာတဲ့ဝင်ပေါက်ပေးခြင်းစဉ်အခါ, ထုတ်လွှင့်ကဏ္ဍမှာအဘို့အဖြေရှင်းချက်စောင့်ကြည့်၎င်း၏ကြီးထွားလာအစုစုကိုမှ InSite ထည့်သွင်းဖို့ TSL ထုတ်ကုန်များနိုင်ပါတယ်။ ခရစ် Exelby, မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ TSL ...
CCW 2015 မှာ Solutions ၏ TSL ကုန်ပစ္စည်းများဟန်ပြနောက်ဆုံး Range
ရပ်တည်ချက် 2015 အပေါ် CCW 654 မှာထုတ်လွှင့်စက်ကိရိယာများထုတ်လုပ်သူဦးဆောင် TSL ကုန်ပစ္စည်းများ၎င်း၏အသစ်ဒီဇိုင်းမြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် (Monitor Plus အားအသံ) မိသားစုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သော MADI, SDI, AES-3 နှင့် analogue အဖြစ် - - အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသံအရည်အသွေးပိုမိုလွယ်ကူခြင်းပူဇော်အထိမြေပြင်ကနေပြန်လည်တည်ဆောက်သစ်အသံစောင့်ကြည့်မှုအကွာအဝေး I / O ထူထောင်ဘို့ဖြေရှင်းချက်ပေးထားကိုလည်းလက်ခံနေစဉ် ...
ဆစ်ဒနီ, အောကျတိုဘာ 30, 2015-Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းကိရိယာ, ကင်မရာထောက်ခံမှုဖြေရှင်းချက်တီထွင်ဆန်းသစ်၏ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, ကဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအာရှနှင့်အာဖရိကအဖြစ်ယောသပ်သည်အဖြူရောင်ငှားရမ်းထားသည်ဟုကြေညာဖို့ကျေနပ်သည်။ အဖြူရောင်ကဤဒေသများအတွင်း Miller ကထုတ်ကုန်လိုင်းများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ချဲ့ထွင်ပါလိမ့်မယ်။ "ကျနော်တို့ကယောသပ် Miller ကအသင်းကို join ရှိသည်ဖို့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်" ...
ဘာ? တစ်ဦးကတောက်ပထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဆူညံ FAN မပါဘဲ LED?
သငျသညျစွမ်းအင်ချွေတာတောက်ပ LED အလင်းလ်တာနှင့်သင်၏စတူဒီယို upgrade လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ, ဒါပေမယ့်ပရိတ်သတ်တွေတစည်း၏ hum မလိုချင်သလဲ? သငျသညျ PrimeTime နဲ့ LED ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆန်းသစ်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ကြပြီးအအေးခံခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာဆက်လက်ရှိနေရန်တစ်ဦးက FAN မလိုအပ်ပါဘူးသင်သိရသလား? သူတို့တောက်ပနေနှင့်အနည်းငယ်သာပါဝါကိုအသုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာများနှင့်စက်ရုံမန်နေဂျာ PrimeTime ရဲ့အကြမ်းခံအလင်းအိမ်ခိုလှုံပါ၏။ ...
နယူးစုံစမ်းပြပွဲရဲ့ကြော့ကြည့်ကွန်ယက်ရဲ့သတင်းကွဲပြားခြင်းများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်ပြခန်းရဲ့အစောပိုင်းအလုပ်အပေါ်တည်ဆောက်။ ဝါရှင်တန်နိုင်ငံရေး၏ဂရင်းနစ်, CT- အဆိုပါရှုပ်ထွေးကမ္ဘာကြီးသည်ယဉ်အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ပြခန်းရဲ့ကြော့အဓိကခေါင်းစဉ်တွင်ကွေးဖန်၏စနစ်နှင့် Sinclair အသံလွှင့် Group ၏အသစ်ကတနင်္ဂနွေစုံစမ်းသတင်းပြပွဲများအတွက် In-ပြပွဲဂရပ်ဖစ်အထုပ်အသွင်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ် "Sharyl Attkisson နှင့်အတူအပြည့်အဝတိုင်း။ " အဆိုပါ ...
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန် - 29 အောက်တိုဘာလ 2015 - Chabot ကောလိပ်, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကာအသိအမှတ်ပြုအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်၎င်း၏မီဒီယာစင်တာမှာတီဗီစတူဒီယိုထဲမှာ Calrec Summa အသံ console ကို install လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ Chabot ကောလိပ်ထုတ်လွှင့်ကျောင်းသားများကိုယခုဒေသခံဖြစ်သော CBS Affiliate နှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားအခြားသူတွေကဲ့သို့တူညီသောစားပွဲပေါ်မှာသုံးပြီးလေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စံပစ္စည်းကိရိယာများထားရှိခြင်းကိုလည်းပေးသည် ...
High Dynamic Range (HDR) Technologies က၏အနာဂတ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးနေရပ်လိပ်စာမှ SMPTE (R) နှင့်အတူမိတ်ဖက်, CCW 2015 တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်ထုတ်လုပ်
White Plains, နယူးယော့ - အောက်တိုဘာ 29, 2015 - Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (R) (SMPTE (R)), ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပညာရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ Society က ယနေ့က "High Dynamic Range ဖို့လမ်းမကြီး: ရှာဖွေခြင်းရှင်းလင်းမှု" အမည်ရ panel ကိုထုတ်လုပ်ရန်အကြောင်းအရာ & ဆက်သွယ်ရေးကမ္ဘာ့ဖလား (CCW) နဲ့ ပူးပေါင်း. ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် CCW 2015 မှာ ...
Aframe 2015 လွှတ်ပေးရန် Fall, ဖိုင်လွှဲပြောင်းစွမ်းရည်နှင့် format နဲ့ထောက်ခံမှုချဲ့ထွင်အသစ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု & မီဒီယာစာကြည့်တိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုအင်္ဂါရပ်များဖြည့်စွက်ခြင်း, ယနေ့တွင် Aframe ယင်း၏သည်မိုဃ်းတိမ်ကိုဗီဒီယိုပူးပေါင်းပလက်ဖောင်းရဲ့နောက်ကြားမှာဖြန့်ချိကစားသမားအတွင်းအသံ features တွေပိုကောင်းစေပါတယ်။ Aframe ရဲ့ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်အစီအစဉ်မှစပါးကိုရိတ်စိတ်ကူးများနှင့်အကြံပြုချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးသစ်ကိုစွမ်းရည် featuring, သစ်ကိုဖြန့်ချိကော်ပိုရိတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များဖွ ...
1 ၏စာမျက်နှာ 1912345 » 10...နောက်ဆုံး»